मार्सी चामलको भात खुवाउने प्रसाईलाई कार्वाही हुँदैन ? - samayapost.com
मार्सी चामलको भात खुवाउने प्रसाईलाई कार्वाही हुँदैन ?
समयपोष्ट २०७५ साउन १० गते १:५७
कसैको गालीबेइज्जती गरे के हुन्छ ? कानुन भन्छ, ‘मुद्दा चल्छ र सजाय हुन्छ ।’ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यसो गरे उसको पद नै जान्छ । जस्तो कि भर्खरै कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ राजीनामा दिन बाध्य भए । उनले एउटा समूहका चेलीहरूलाई औंल्याएर दिएको मन्तव्य रातारात सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।
आजको कान्तिपुरमा खबर छ,भूलबसै सही, कसैको मर्ममा प्रहार हुने गरी बोलेबापत तामाङले एक ढंगको कारबाही भोगेका छन् । तर यही कुरो उनले भन्दा चर्को स्वरले र पहिले भनेका थिए मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले ।
भक्तपुरमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मार्सी चामलको भात खुवाएका उनले चेलीहरूको सामूहिक रूपमा हुर्मत लिने काम मात्रै गरेका होइनन्, पन्ध्रौं सत्याग्रहमा होमिएका डा. गोविन्द केसीलाई मर्न दिऊँसमेत पनि भने । उनका यी दुवै भिडियो टवीटर, फेसबुक र युट्युबमा भाइरल हुन पुगे ।
महाकाली थुनेरै सडक निर्माण गर्दा नेपालतिरको बाटोमा क्षति
अर्घाखाँची निषेधाज्ञा पुन: एक साता थप, यी क्षेत्रमा कडाई
जर्मनीले दिने भयो चार अर्ब ८० करोड अनुदान, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च गरिने